तपाइँको स्प्रिंगबोर्ड (साइडिया) को लागी HTC- शैली विजेटहरू आईफोन समाचार
तपाईको स्प्रिंगबोर्डका लागि HTC- शैली विजेटहरू (Cydia)
HTC- शैली विजेट एक कालातीत क्लासिक हो। हालसालै साइडियामा देखा परेका नयाँ ट्वीकहरूको समीक्षा गर्दै मैले यस प्रकारका दुई नयाँ विजेटहरू भेट्टाए र आइओएस new को नयाँ शैलीको बावजुद तिनीहरू हाम्रो उपकरणको स्प्रिboardबोर्डमा पूर्ण छन्, त्यसैले म यस अवसरलाई गुमाउन चाहन्न। उनीहरूको बारेमा लेख प्रकाशित गर्नुहोस्। यो पनि दुई विजेट हो धेरै सजिलैसँग कन्फिगर गर्न सकिन्छ, कोड सम्पादन नगरीकन, कन्फिगरेसन मेनूलाई धन्यवाद जुन उनीहरूले सम्मिलित गरे, र त्यसलाई केवल आईविजेट्स स्थापना गर्न आवश्यक छ।
1 HTC एनिमेटेड मौसम पूर्वानुमान घड़ी आईविजेट
2 iWidget एनिमेटेड HTCFlipclocks
HTC एनिमेटेड मौसम पूर्वानुमान घड़ी आईविजेट
यो धेरै लामो नाम पछाडि हामी एक शानदार र नि: शुल्क विजेट फेला पार्दछौं। HTC को विशेषता घडी, वर्तमान मौसम, र--दिनको भविष्यवाणीको साथ, जसमा हामीले मौसमको एनिमेसन पनि थप्नु पर्छ जुन हालको अवस्था अनुसार फरक हुन्छ। यो विन्यास योग्य छ, एनिमेसन वा पाँच दिनको भविष्यवाणी निस्क्रिय गर्न सक्षम हुँदै, र डिग्री सेल्सियसमा तापमान देखाउँदछ। शहर कन्फिगर गर्नका लागि तपाईले शैली "SPXX" मा कोड प्रविष्ट गर्नुपर्नेछ।, जुन तपाईं पृष्ठमा प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ Weather.com। तपाइँको शहर त्यो पृष्ठमा फेला पार्नुहोस् र कोड प्रतिलिपि गर्नुहोस् जुन अन्तमा देखा पर्दछ (ग्रेनाडाको लागि, उदाहरणका लागि, SPXX0040)।
iWidget एनिमेटेड HTCFlipclocks
लामो नामको अर्को विजेट, भुक्तानी को यस समय ($ ०.0,99)) र त्यो बदलामा हामीलाई एक मा4प्रदान गर्दछ। मौसम जानकारी बिना दुई विजेटहरू, एक सेतोमा र कालोमा, र हालको मौसमको साथ दुई विजेटहरू पनि कालो र सेतोमा। अघिल्लोहरू जस्तै, तिनीहरू कन्फिगर योग्य छन्, तर अधिक विकल्पहरूको साथ। सम्भावित भाषा छनौट गर्न र GPS स्थान प्रयोग गर्न अघिल्लोको मुख्य फरक हो। यदि तपाईं निश्चित स्थान प्रयोग गर्न चाहानुहुन्छ भने जीपीएस निष्क्रिय गर्नुहोस् र तपाईंको शहरको कोड प्रविष्ट गर्नुहोस्, तर यो समय फरक छ। तपाईको कोड प्रयोग गर्नुपर्नेछ याहूइन्टरनेट ठेगानाको अन्तमा पनि जब तपाईको शहरमा आफ्नो खोज इञ्जिन प्रविष्ट गर्नुहुन्छ।
याद गर्नुहोस् कि यो स्थापना गरिएको हुनु पर्छ आईविजेट्स। विजेटहरू राख्न, एक पटक स्थापना भएपछि, स्प्रिboardबोर्डमा खाली स्थानमा क्लिक गर्नुहोस् र केही क्षणको लागि होल्ड गर्नुहोस्। एक मेनू प्रदर्शित हुनेछ जसमा तपाईले विजेट चयन गर्नुपर्नेछ, र कन्फिगरेसन स्क्रिन देखा पर्नेछ। विजेटलाई सार्न वा हटाउनको लागि तपाईंले अनुप्रयोग हटाउनु पर्ने हुन्छ।
लेखको पूर्ण मार्ग: आईफोन समाचार » जेल » Cydia » तपाईको स्प्रिंगबोर्डका लागि HTC- शैली विजेटहरू (Cydia)
म केहि पनि प्राप्त गर्दिन, मैले SPXX र संख्या राखें र यसले मसँग अन्तरक्रिया गर्दैन।
धेरै राम्रो योगदान। धन्यवाद।
Desmon लाई जवाफ दिनुहोस्
यदि यो Cydia संग यस प्रकारको कुराको लागि नभएको ... iOS दुई ड्र्यागनफ्लाइको संभोग भन्दा iOS बढी बोरिंग हुनेछ।
लामो प्रत्यक्ष Cydia .... एप्पल यति धेरै प्रतिबन्ध लानुहोस्!
नमस्कार राम्रो !! ठिक छ, मैले जिप कोड र मेरो शहरको वेदर कोडको साथ प्रयास गरेको छु, र सत्य यो हो कि यसले मेरो लागि काम गर्दैन, यो "खाली" रहन्छ, म मात्र समय पाउँछु। यदि कसैले मलाई मद्दत गर्न सक्दछ भने, मेरो शहर अल्फारो (स्पेन) हो; अग्रिम धन्यवाद। 🙂
Fermintxo95 लाई जवाफ दिनुहोस्
नमस्ते, यो धेरै राम्रो छ, तर म spxx देश कोड फेला पार्न सक्दिन, म मेक्सिको सिटीबाट हुँ, म आशा गर्दछु कि तपाईंले मलाई यो प्राप्त गर्न मद्दत गर्न सक्नुहुन्छ, धन्यवाद।
Asaf लाई जवाफ दिनुहोस्
नमस्कार, केवल एक प्रश्न, के यो गृह स्क्रिनमा राख्न सम्भव छ, किनकि यसले सबै आईकनहरू ढाक्छ।
Jlsoler लाई जवाफ दिनुहोस्
घेरा हाल्न, तपाईले IBLANK डाउनलोड गर्नु पर्दछ साइडियाबाट जसले तपाईका लागि खाली आईकनहरू सिर्जना गर्दछ ताकि अरुले नदेऊ।
म्याटलाई जवाफ दिनुहोस्
र तपाईलाई पनि धन्यवाद
नमस्ते jlsoler; म्याटले भनेको अनुसार तपाईसँग पारदर्शी आईकनहरू सिर्जना गर्न आईब्या i्क छ। मलाई ग्रिडलक राम्रो मन पर्छ, किनकि यसले के गर्छ तपाईले चाहानु भएको अनुप्रयोगहरूका आइकनहरू राख्नु, तपाईलाई चाहिने खाली ठाउँहरू छोड्नु हो।
या त एक राम्रो विकल्प हो।
ट्वीकको बारेमा, तिनीहरू धेरै राम्रा छन्, तर आईओएस for को लागि, मेरो विचारमा यो यस अपरेटिंग सिस्टमको सौन्दर्यको साथ चरणबाट बाहिरको हो। त्यहाँ iOS fl को शैलीमा केहि फ्लिपक्लॉक वा केहि छैन?
तपाईं यहाँबाट शहर कोडहरू प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ:
र विजेटमा तपाईले राख्नु पर्छ: SPXX0111 Mérida (Extremadura) को लागी
तर त्यहाँ केहि छैन जुन उदाहरणको लागि मैले अल्फारोलाई खोजेको छु र यो देखा पर्दैन।
अर्को समाधानमा जानुहोस् http://espanol.weather.com र त्यहाँ तपाईको शहर खोज्नुहोस्, एकचोटि तपाईले यो स्थित गर्नुभयो भने, ठेगानाको अन्त्यमा हेर्नुहोस् जुन ब्राउजरमा देखा पर्दछ र तपाईले कोड देख्नुहुनेछ, उदाहरणका लागि अल्फारो हो: SPLO0056
लोरिपिटुलाई जवाफ दिनुहोस्
http://edg3.co.uk/snippets/weather-location-codes/ त्यहाँ कोडहरू छन्
फर्नांडो पोलो (@लालोडोइस) भन्यो
म किन दुईवटा फाईलहरूको लागि "HTTP / 1.1 404 फेला परेन"?
फर्नान्डो पोलोलाई जवाफ दिनुहोस् (@लालोडोइस)
तपाईले शहरको कोड कहाँ राख्नु पर्छ ???
IQTELL, एक साधारण कार्य प्रबन्धक भन्दा धेरै
तपाईं अब स्पेनमा एप्पलको दुई-चरण प्रमाणिकरण सक्रिय गर्न सक्नुहुनेछ। हामी तपाईलाई सबै कुरा व्याख्या गर्दछौं।